के मेहनत उसिनेर अन्डा खाना पकाउनु भन्दा सजिलो हुन सक्छ? यो पारंपरिक बुद्धि गलत छ। तथ्यलाई ताजा अन्डा खाना पकाउने तीन तरिकामा छन् कि र तिनीहरूलाई प्रत्येक एक धेरै nuanced दृष्टिकोण आवश्यक छ। यस मामला मा तपाईं राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। सबै को पहिलो, तपाईंले testicles के आवश्यक छ निर्धारण। नरम-उसिनेर मेहनत उसिनेर वा "झोला"? विकल्प बनेको छ एक पटक, तपाईं पकाउने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो हत्येदार बरतन मा अन्डा जोश, तिनीहरूले पानी उम्लिरहेको र अन्य एक मार मा स्केट थिएन कि राम्रो, त्यसपछि जस्ताको तस्तै बाँकी छन्।
पहिलो नियम अनुगमन गर्न, पकाउने विधि बिना छ। कुनै पनि मामला मा अन्डा चिसो हुँदैन। तिनीहरूले फ्रिज र चालीस मिनेट देखि, र प्राथमिकताको एक घण्टा अग्रिम हटाउन एक नैपकिन धारण गर्न आवश्यक छ। हतारमा हुँदैन, अन्डा चिसो र गर्मी दुवै दिन हिचकिचाउने कि सम्झना। छैन चालीस भन्दा कम मिनेट testicles सुत्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि, हार्ड-उसिनेर अन्डा खाना पकाउनु, तिनीहरूले ढाल्नु आवश्यक छ। यो खोल पकाने को अन्त गर्न उम्लिरहेको पानी र अन्डा मा टूट छैन कि एक जरूरी पूर्ण बरकरार छ।3मिलिमिटरमा, अधिक - Prick को सुई2प्रविष्ट गर्नुपर्छ, चिटिक्क हुनुपर्छ।
को भुत्ते अन्त देखि अन्डा र छेड्नु लिनुहोस्। बाँकी अन्डा संग नै गर्छन्। पिन testicles पहिले देखि नै उम्लिरहेको पानी मा राखे गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले जस्ताको तस्तै बाँकी छन्। किन पानी उम्लिरहेको मा अन्डा राख्नु आवश्यक छ? 12 सेकेन्ड - यो कुरा तीन पकाउने विधिहरू प्रत्येक 10 सम्म समय को एक निश्चित रकम आवश्यक छ। चिसो पानी मा अन्डा र प्रतीक्षा यदि यो फोडा गर्न सुरु नभएसम्म उनीहरूले तयार छन् क्षण सम्झना आउँछ। पानी कहिले काँही बिस्तारै चाँडै कहिलेकाहीं फोडे। तर तातो पानी प्रोटिन पहिले नै सेट गर्न सुरु र प्रक्रिया irretrievably भङ्ग गरिएको छ। त्यसैले, केवल उम्लिरहेको पानी र केवल अन्डा मा झुन्ड्याइएको।
हामी पहिलो hardboiled चिकन अन्डा खाना पकाउने को विधि विचार गर्नुहोस्। पानी अन्डा काट्नु, तिनीहरूलाई बिछाउने एक एक ठूलो चम्चा एक पट मा फोडा गर्न, सुरु भयो। यो सबै अन्डा लगभग एक साथ को Boiling पानी थिए भनेर चाँडै गर्नुपर्छ। पैन असम्भव छ पानी यो भन्दा बढी जोश सक्छ कि जोखिम बिना सबै पकाउने समय पर्याप्त हुनुपर्छ कवर। पानी उम्लिरहेको मा राखिएको अन्डा जब क्षण देखि, काउन्टडाउन गएको। ठीक 8 मिनेट तपाईं हार्ड उबला अन्डा पकाउन भने। यस पहेंलो भाग हरियो उत्तेजित गर्दछ - कम पकाउने, तपाईं अब यो थैली मा अन्डा पकाउन प्राप्त गर्नुहोस्।
अब कसरी खाना पकाउनु अन्डा उसिनेर। यो विधि जब तपाईं हार्ड उबला अन्डा पकाउने मात्र अवधि पकाउन विधि भिन्न हुन्छ। चिकन अन्डा पकाउने समय को एक औसत मूल्य3मिनेट र 30 सेकेन्ड को लागि उसिनेर छ। यो प्रोटिन पूर्ण "कब्जा" गरिनेछ, तर, र पहेंलो भाग तरल रहनेछ। चिकन अन्डा, उबला नरम-उसिनेर तातो आवश्यकता सेवा गर्छन्। तसर्थ, परंपरागत उसिनेर अन्डा राम्रो ढिलाइ खोल सफाई गर्दा लामो, 2-3 सेकेन्डको लागि आवश्यक छ लागि चिसो पानी doused।
यो, यो "झोला मा" खाना पकाउने गर्नुपर्छ अन्डा खाना पकाउने अर्को तरिका विचार रहनेछ। धेरै स्वादिष्ट, यदि सही र ठीक सफा नुन "झोला मा" उसिनेर अन्डा। पानी उम्लिरहेको मा टिकी अन्डा बिछाउने पछि ठ्याक्कै4मिनेट "झोला मा" कुक चिकन अन्डा। तर टाटु ईस्टर अन्डा खाना पकाउने अघि आवश्यक छैन। अन्डा चिसो पानी मा हटाइएका छन् र पानी फोडे गर्दा समय सुरु गर्नुहोस्। ईस्टर अन्डा कम्तिमा 10 मिनेट खाना पकाउनु राम्रो छ। यो एउटा इस्टर अन्डा छ भने, एक हार्ड उबला अन्डा पकाउन पर्याप्त छैन। पहिलो तिनीहरूले राम्रो पकाएको, बलियो हुन छ। दोस्रो ईस्टर अन्डा चित्रकला पछि लामो समय र चर्च को consecration लागि झूठ हुनेछ। यस लेखमा हामी कसरी समय अन्डा पकाउन गर्न प्रश्नको जवाफ, र कसरी सबै भन्दा राम्रो यसलाई गर्न।
समय-परीक्षण व्यञ्जनहरु। घर मा रोस्ट
को जाडो लागि स्याउको रस मा टमाटर। पकाउने व्यञ्जनहरु
तारेको व्यंग्य, धेरै embodiments मा निर्धारण
आकर्षण: के र कसरी सिर्जना गर्न?
यो सिजन जूता Wedges के लगाउन?
हरेक स्वाद को लागि Smetannikov नुस्खा चयन!
वर्ग मीटर फ्रान्स क्षेत्र। मी। भूगोल, जलवायु, र देशको जनसंख्याको प्रकृति